Musa ukubulala i-mood ngenxa yokuba uxolo lumbongolo unenkinga! (kuveliswe) - Ukubala kwe-NYE ku-Djs, Vjs, ii-nightclub 2019
SKU: DJ DROP 100 - #31 Udidi: DJ Drops
Musa ukubulala i-mood ngenxa yokuba uxolo lumbongolo unenkinga! (kuveliswa)
Ixesha leTaco Bell! (i-2 version) (iveliswe)
Asinabo uxanduva lokukhulelwa ngenxa yolu busuku! (Kuveliswe)
Ndiyabulela ngokuphuma kunye nokubhiyozela uEva wonyaka omtsha nathi. Sivaliwe ngoku ukuze sikubone kwi-White Castle! Hayi ukufumana FUCK ngaphandle! (kuveliswa)